yintoni pridcution ekhuselekileyo: Iprodcution ekhuselekileyo bubunye bokhuseleko kunye neprodcuton, kwaye injongo yayo kukukhuthaza imveliso ngokukhuselekileyo, kunye neprodcutionmust be safe. Ukwenza umsebenzi olungileyo kukhuseleko kunye nokuphucula iimeko zokusebenza; ukunciphisa ilahleko yepropathi kunokunyusa ukusebenza kakuhle kweshishini, kwaye ngokungathandabuzekiyo kuya kukhuthaza uphuhliso lwemveliso; kwaye iprodcution kufuneka ikhuseleke kuba ukhuseleko yinto efunekayo yokuphelisa, kunye nemveliso yemveliso ayifumaneki ngaphandle kokhuseleko Ukwenza umsebenzi olungileyo kukhuseleko lwemveliso kunye nokunciphisa iingozi zengozi kunye nelahleko ye-exonomucu ayisiyoxanduva olusemthethweni lweshishini kuphela, kodwa ikwayixanduva olubalulekileyo lwentlalo lwamashishini .Ngoko ke, emsebenzini wethumwemwe kufuneka asebenze ngokwemigaqo eyahlukeneyo yemveliso yokhuseleko.
Imveliso yokhuseleko inesiqalo kuphela kwaye ayinaso isiphelo .Ukhuseleko lomsebenzi ngumsebenzi ophelisa i-neber.Ufanele uhlale usebenza ngokungakhathali .Iintsimbi ze-alamu kufuneka zikhale rhoqo .Awunakho ukukhululeka amaxesha ngamaxesha, ngesiquphe kubanda kwaye kushushu. Unamathuba amancinci okusebenza kwengqondo kunye neengcinga eziphazamisayo .Akukho meton "kubalulekile ukuyithetha, yesibini ukwenza, kwaye ayenzi" .Ngokuphuhla kunye nenkqubela phambili yenzululwazi kunye netekhnoloji, imveliso ekhuselekileyo nayo ihlala ihlangabezana notshintsho kunye neengxaki. Kufuneka sibe ngabahle ekufumaneni iimeko ezintsha kwiinkqubo ezintsha kwaye siphakamisa ezintsha .Ingxaki, amaphiko ngeendlela ezintsha .Kwimeko yemisebenzi emitsha neyenziwayo, kufuneka simisele umxholo wokhuseleko "wendawo yokuqala kuphela kunye nendawo yokuphela". Ngokwenene "izilumkiso" zokuthintela ikamva.